BCGE | Business Coalition for Gender Equality – Welcome To BCGE
CMHL is the largest retail group and market leader in the Supermarket, Hypermarket, Pharmacy, Convenience Store, Bakery and Café formats in Myanmar.
The Kanbawza (KBZ) Group of Companies was founded in 1994 and now has more than 80,000 employees. With roots inafamily business, the family’s core values are integrated in the group’s corporate values. KBZ Bank is committed to giving back to society, and is recognized to be the leading philanthropic organization in Myanmar and has been awarded for its CSR initiatives.
KBZ MS General Insurance was established in September 2012 as part of KBZ Group of Companies under the name of IKBZ Insurance Co. Ltd., KBZ MS is the first officially licensed private insurance provider in Myanmar. Headquartered in Yangon, KBZ MS has an extensive network with many thousands of Insurance customers in 19 cities and 21 branches across Myanmar.
Shwe Taung is one of the leading corporations in Myanmar withadiversified portfolio of business interests focusing on six core sectors – building materials, distribution, engineering and construction, infrastructure investments, lifestyle, and real estate.
Shwe Taung | Inspiring Lives. Sustaining Progress.
With 10 companies working across oil and gas and power sectors, PARAMI ENERGY aims to become Myanmar’s ethical energy company.
ပိုမိုကောင်းမွန်သော လုပ်ငန်းခွင်နေရာများ တည်ဆောက်ခြင်း။
Building Better Workplaces. Empowering Businesses.
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၊ ကျားမတန်းတူညီမျှရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအသင်း The Business Coalition for Gender Equality (BCGE) သည်စီးပွားရေးကဏ္ဍ၏ ဦးဆောင်ကုမ္ပဏီများဖြင့်စုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားသော အကျိုးအမြတ်မယူသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပြ We are funded by the Australian Government through Investing in Women ီးမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ လုပ်ငန်းခွင်နေရာများတွင် ကျား၊မတန်းတူညီမှုရရှိရေးအတွက် ရည်ရွယ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။
အမျိုးသမီးများအတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်မှုတိုးတက်စေရန် အစီအစဉ် အမျိုးသမီးများအား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း၊ အမျိုးသမီးများအတွက်ဈေးကွက်များတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် ဖိလစ်ပိုင်၊ ဗီယက်နမ်၊ မြန်မာနှင့်အင်ဒိုနီးရှားတို့တွင် အမျိုးသမီးများ၏စီးပွားရေးစွမ်းရည်ကိုမြှင့်တင်ရန်အမျိုးသမီးများအတွက်ပုဂ္ဂလိကနှင့် အများပြည်သူဆိုင်ရာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများလွှမ်းမိုးဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်ရှိ ပြည်သူလူထုအတွက်အလုပ်ခွင်ကျား၊ မတန်းတူညီမျှမှုရှုထောင့်မှစီးပွားရေးလိုအပ်ချက်များကို အပြည့်အ၀ အထောက်အပံ့ပေးရန်
အလုပ်ခွင်တွင် အမျိုးသမီးလုပ်သားအင်အားပါဝင်မှုကို အတူတကွပူးပေါင်းပါ၀င်အားပေးရန်
လုပ်ငန်းခွင်၌ကျား၊ မတန်းတူညီမျှအခွင့်အရေးရရှိစေရန်အတွက် အကောင်အထည်ဖော်မှုတွင်ပံ့ပိုးမှုပေးရန်
မြန်မာနိုင်ငံဥပဒေတွင်ကျား၊ မရေးရာတန်းတူညီမျှမှု၊ စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများကိုလက်လှမ်းမီမှုနှင့်နိုင်ငံရေးအရကိုယ်စားပြုမှုတို့ရှိသည်။
UNFPA Myanmar | Gender Equality 2018
“ကျား၊ မရေးရာတန်းတူညီမျှမှုသည် အရေးတကြီးလိုအပ်သည့် ကိုယ်ကျင့်တရားနှင့်လူမှုရေးပြဿနာသာမကအားလုံးပါဝင်နိုင်မှုနှင့် အရေးကြီးသောစီးပွားရေးစိန်ခေါ်မှုလည်းဖြစ်သည်။
အထူးသဖြင့်အလုပ်ခွင်၌ ကျွန်ုပ်တို့သည်အလုပ်ခွင်၌တန်းတူညီမျှမှုရှိရန်တစ်ဦး ချင်းစီမိမိတို့၏ကိုယ်ပိုင်အခွင့်အရေးများတွင်ရရှိရန် ဦးစွာဆောင်ရွက်သည်။
ပိုမိုအားကောင်းသောသက်ရောက်မှုဖြစ်စေရန် ကျွန်ုပ်တို့၏အစပြုလုပ်ဆောင်မှုများကို ပေါင်းစပ်ရန်အားလုံးအတူတကွစုရုံးရမည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ “
Zarchi Tin, CEO at Dai-ichi Life Insurance Myanmar Ltd
အလုပ်ခွင်များတွင် အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများကို အလုပ်နှင့်မိသားစုတာဝန်များကို ညီတူညီမျှလုပ်ဆောင်သည့် ဝန်ထမ်းအတွက်သာမက လုပ်ငန်းခွင်အတွက်ပါ အကျိုးရှိစေမည့်မူဝါဒများကို အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသည်
“အလုပ်နှင့်မိသားစုတာဝန်များကို ညီတူညီမျှမျှဝေနိုင်ရန်အတွက် အလုပ်ခွင်များတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများကိုထောက်ပံ့ရန် မူဝါဒများကို အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသည်။ကျား၊ မတန်းတူညီမျှမှုဆိုသည်မှာကျား၊ မ၊ အသက်၊အယူဝါဒမရွေး တန်းတူညီမျှလစာနှင့် ရပိုင်ခွင့်တန်းတူရရှိရေးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ ကော်ပိုရေးရှင်း DNA တွင်အရေးကြီးသောအခန်းကကဏ္ဍမှပါ ၀ င်ပြီးထိုကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ အများပြည်သူသိရှိစေရန်ပိုမိုလုပ်ဆောင်ပေးသည့်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ယူပါသည်။ ”
Win Win Tint, Board Member, Business Coalition for Gender Equality, Group CEO, City Mart Holding Co., Ltd
“ကျွန်ုပ်တို့၏ အစီအစဉ်သည်ရည်မှန်းချက်ကြီးမားပြီး အောင်မြင်နိုင်သည်။ အမျိုးသမီးများအတွက်စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝသောပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခု ကိုဖန်တီးရန်ကတိပြုသည်။ ”
Daw Aung San Suu Kyi Vows To Create ‘Enabling Environment For Women’ 2017